Deji Qoraayo leh Yoast's WordPress SEO | Martech Zone
In yar ka dib, waxaan wadaagnay sidaan u helnay Dejinta Qoraa on our site. Qoreynta waxay noqotay istiraatiijiyad muhiim ah, kordhinta qiimaha gujiska natiijooyinka mashiinka raadinta ee leh jeex jeexan, iyo kordhinta suurtagalnimada in boggaaga WordPress uu si fiican u kala sarrayn doono.
Waxaa jira horumar aad u yar oo lagama maarmaan u ah maanta si loo suurtageliyo qoraaga iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qaar ka mid ah qorayaasha waaweyn ee wax ka qora halkaas sida Joost De Valk. Fure u ah habkan awood u siinta qorista ayaa ah inaan diirada saaro bogag badan oo qorayaal ah, oo aan ahayn hal bog oo adeegsadeyaal ah (kuwaas oo aad ufudud u ah awooddooda).
Waxaa jira Qalabka qoraalka ah ee WordPress, laakiin waxaan si daacad ah u jecel nahay isdhexgalka Yoast's WordPress SEO plugin mawduuceena halkii. Waa tan sida:
Rakib oo awood Yoast's WordPress SEO plugin. Tani waxay awood u siin doontaa qaybaha bulshada ee lagama maarmaanka u ah boggagaaga bogga waxayna awood u siin doontaa astaamaha qorsheynta lagama maarmaanka u ah ee ku soo gurguurta Google.
Hubso inaad haysato qoraa lagu daabacay mid kasta oo ka mid ah qoraaladaada barta internetka ee ku qoran tusmada iyo bogagga hal boostada. Waxaad ka arki kartaa lambarka lagama maarmaanka u ah boostadayada sida loo sameeyo Dejinta Qoraa on our site.
Samee qorayaasha bogga shaxankaaga si martidu u arki karaan dhammaan qorayaasha balooggaaga. Waxaan sameynaa shaandheyn dheeri ah si aan u hubinno inay dhajiyeen ugu yaraan hal mar sanadkii ugu dambeeyay.
Samee bogga qoraaga qoraaga, sida tayda oo kale - Douglas Karr. Waxaan jecel nahay inaan daabacno macluumaadkooda adeegsadayaasha macluumaadka iyo sidoo kale dhammaan xiriirrada bulshada. Xiriiriyaha Google+ ayaa fure u ah halkan - waxay daabacdaa walxaha lagama maarmaanka u ah si loo abuuro xiriir ka dhexeeya qoraaga iyo astaanta
Qorayaashaadu ha buuxiyaan kooda URL cinwaanka Google+ ee ku jira astaanta adeegsigooda ee WP.
Qorayaashaadu ha ku darsadaan balooggooda Muuqaalka Google+ ee Ka-qaybgale qaybta.
Ku tijaabi bogga qoraaga Tijaabinta Xogta Habaysan ee Google qalab.
Xusuus-qorkii ugu dambeeyay… xitaa haddii qalabka baaritaanka uu muujiyo inay wax walba fiican yihiin, weli waxay u baahan tahay waqti in lagu arko sawirradaada muuqaalka natiijooyinka.
Tags: qoraaqoraagaqoraaga wordpresswordpress plugin qoraagayoast
Isku-xirka: Isku-darka Cloud CRM ee loogu talagalay SMB